Kabaja Ayyaana Maariyaamii Haadha Hundaa (ብዙኃንማርያም)
Dn Takiluu Hayiluun
Ayyaanota gurguddoo haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyamii yeroo mara kabajaman keessaa ayyaanni Maariyaamii haadha hundaa (ብዙኃንማርያም) jedhamuun Fulbaana digdamii tokko(21) kabajamu isa tokko. Ayyaanni kun sababa gurguddoo lamaaf kabajama.
Inni Duraa Hayyoonni Mana Kiristaanaa fagoodhaas dhiyoodhaas walitti qabamuun amantaa ishee duraa eegsisuuf yaa’ii isaan taasisan sababeeffachuun yoo ta’u,
Inni lamaffaan immoo Fannoon Gooftaa keenya, qoricha keenya, Iyyasuus Kiristoos irratti fannifame GisheenDabra Karbee guyyaa itti gale sababeeffachuun kabajama. Sababiiwwan armaan olitti caqasaman kanneen gabaabsinee yoo ilaallu;
Duuka bu’aa wareegamaa Qulqulluu Pheexiroos kan ture Aariyoos Kitaaba Fakkeenyaa Abbaa
Read more: Kabaja Ayyaana Maariyaamii Haadha Hundaa (ብዙኃን ማርያም)
Sababa cubbuu keenyaaf inni fannoo irratti fannifamee 1Phex 2:24
D/n Takiluu Hayiluutiin
Jechi fannoo isaa warreen badaniif gowwummaa, nuyi warreen fayyinuuf garuu humna Waaqayyootti, akkuma jedhe ifni addunyaa Qulqulliichi Phaawulos, Mannii kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa ayyaanota gurguddoo kabajuu kessaa ayyaanni Fannoo (Masqalaa) tokko.
Waaqayyo jaalala dhala namaaf qabuu karaa hedduu mul'iseera. Waadaa dhiifama Addaamiif gale raawwachuuf fayyina addunyaa labsuuf Abbotii hangafoota, Raajota, Mootota, kaasuun fakkeenyaan erga barsissee booda gaafa guyyaan beelama gau magaala Daawwiit kan taate Beeteliheemiitti Gooftaa dubroo Maariyaamii irraa mooraa loonii keessatti dhalateera (Gala.4:4). Dhalachuu isaan barri rakkoo fi gadadoo dhumatee, barri Araaraa, barri nageenyaa eegale. Duukkanni muluqfamee, ifni ni bae, abdiin Addaamii fi ijoollee isaa lammaffaa ni lalise, guyyaan fayyinaa ni dhiyaate. Luq 2:15
Read more: Sababa cubbuu keenyaaf inni fannoo irratti fannifamee 1Phex 2:24
“Nama moofaa sana dhabamsiisaa”. Efeson.4:22
Dn. Zariyuun Siisaayiin
Qaammee 03/13/2009 B.A
Hordoftoota Amantaa Ortodoksii Tewaahidoo hundaaf baga bara Wangeela Qulqulluu Maatiyoos irraa gara bara Wangeela Qulqulluu Maarqoositti ceetani. Barri kun kana Nagaa,Jaalalaa,Badhaadhinaa fi Gaabbii isiniif haa tahu. Ameen
“Nama moofaa sana dhabamsiisaa”. Efeson. 4:22
Jecha kana kan dubbate ifa addunyaa kan jedhame Qulqulluu Phaawuloosi dha. Jecha kana kan dubbateefis uummattoota Kiristaanaa biyya Efesooni fi dha. Kayyoon barnoota kanaa namoonni kaleessa cubbuu keessa jiraachaa turre,bara haaraa kanatti gaabbiidhaan deebinee nama haaraa akka taanu dha. “Jireenya keessan duraa yaadachaa hawwii isa nama gowwomsu isa badu nama moofaa sana dhabamsiisaa. Afuuraan yaada garaa keessanii keessatti haareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkeettii Waaqayyootiin uumame uffadhaa.”Efeson 4:21-24
Yaa saboota Waaqayyoo nama moofaa kan jedhame fedha foonii dha. Barri baraan yammuu jijjiiramu huccuu haaraa Adii uffachuu qofa osoo hin taane qaama keenya cubbuun moofa’e ykn xuraa’e gaabbiin haareffachuun ykn qulqulleeffachuu qabna. Kanaafidha Raajichi Waaqayyoo Iyuu’el “Waaqayyo akkas jedha laphee keessan guutuudhaan,soomuudhaan,booyichaan,gadduudhanis gara kootti deebi’aa laphee keessan malee uffata keessan hin tarsaasinaa” jechuun kan dubbate Iyuu’el 2:12-13. Laphee keessan tarsaasaa jechuun isaa gaabbii galaa, yarummaa garaa keessan keessa jiru baasaa jechuu dha. Namni fedha foonii hojjetu Waaqayyoo hin sodaatu; hojii Waaqayyo jaalatus hin hojjetu. Namoonni waan akkasii hojjenu yoo jiraanne bara haaraa kanatti hojii keenya moofaa kana dhiisnee barri darbe nu gaha jennee akkuma bara baraan jijjiirre hojii keenya isa moofaa dhiisnee Waaqayyo kan jaalatu hojjechuu qabna. Kanaafidha hangafa Duukaa bu’ootaa kan tahe Qulqulluun Pheexiroos
Read more: “Nama moofaa sana dhabamsiisaa”. Efeson.4:22
“Gidiraan Qulqullootaa baayee dha.” Far.33:19:
Yaadannoo Wareegamaa Zakkaariyaas
Dn Zariyuun Siisayiin
Jecha kana kan dubbate onnee Waaqayyoo kan jedhame Qulqulluu Daawiti dha. Kaayyoon barnoota kanaa hamma kamiyyuu yoo gidiraan nutti baay’ate obsaan Waaqayyoo akka eegnu ykn hanga dhumaatti amanamaa akka ta’u gochuu dha.
“Gidiraan Qulqullootaa baay’ee dha. Waaqayyo hunda irraa isaan fayyisa. Waaqayyo onnee isaanii hunda iyyuu ni eega. Isaan keessaa tokko illee hin dhokatu.” Far 33:19-20
Egaa yaa saboota Waaqayyoo Manni Amantaa Ortodoksii Tewaahidoo Itiyoophiyaatti Fulbaanni 8 guyyaa boqonnaa Wareegamaa hangafa Lubootaa Qulqulluu Zakkariyaas jettee kabajji.Eebbii fi kabajni isaa nurra haa buluutii abbaan keenya Qulqulluu Zakkaariyaas mana Qulqullummaa Iyyerusaalem keessatti Waaqayyoon kan tajaajilu luba ture. Zakkariyaasii fi Haati manaa isaa Eelsaabeex kan eebifamanii fi kan Qulqullaa’an turan.yeroo hundumaa seeraa fi jecha Waaqayyoo ni eegu turan. Akkasumas namoota rakkateef kan gaddanii fi kan rakkatan rakkina keessaa kan baasan turan. Ta’es garuu dhala hin qaban turan. Sababa Kanaan gaddaan kan guutamanii jiraatan turan. Waaqayyos dhala isaaniif akka kennuuf yeroo hundumaa kadhaa ni dhiyeessu turan. Waaqayyo kan isaan hin dhageenye fakkaatee hanga dullumaatti isaan callise. Isaanis waan dulloomaniif waa’ee dhalaa yaaduu dhiisan. Guyyaa tokko lubni Zakkariyaas Waaqayyoon otoo tajaajiluu fi Ixaanaa aarsuu ergamaan Qulqulluu Gabrieel Waaqa biraa ergamee gara Zakkariyaas dhufe. Ilma akka argatus itti hime. Yaa saboota Waaqayyoo meeqaan keenyaadhaa?gaaffiin keenya deebii yoo dhabu amantaa keenyatti hin cimne,namootni baayee abdii kutachuudhaan gara waa beekan kan jennu deemanii amantaa jijjiiruutti kan deeman ni jiru. Zakkariyas garuu ni obse,Waaqayyoos firii obsa isaa mucaa gaarii Yohaannisii kenneefii. Kanaaf obsaan eegachuun barbaachisaa dha. Kanaafidha Raajichi Inbaaqoom “Mul’anni kun yeroo itti rawwatamu isaaf ta’u ni eega,waa’ee guyyaa booddee ni dubbata,garuu soba miti. Yoo lafa irra harkifameyyuu isa eeggadhaa,Inni dhuguma ni dhufa,hin turus jedhe” kan jedhu Inb.2:3
Read more: “Gidiraan Qulqullootaa baayee dha.” Far.33:19:
Gosa Kadhannaa Toorbii (subaa’ee)
i. Kadhannaa Toorbii (subaa’ee) Dhuunfaa (Kan Cufatan)
Dn.Fayyeeraa Fiixumaa fi Dn.Namee Torbaniin kan hiikame
Kadhannaan torbii dhuunfaa namni tokko qofaa isaa ta’uun manaa fi bakka kadhannaaf mijataa ta’etti kan inni qabatu, namni tokkollee osoo hin argiin iddoo kadhannaa isaa cufee sammuu guutuudhaan ta’ee, Uumaan isaa qofti akka isa arguu fi akka dhagahuuf dhuunfaadhaan Kadhannaa raawwatuu dha. (Maat 6:5-13). Bifa gosa kanaatiin, namni tokko yommuu Kadhannaa torbii galu, cufaa jedhama. Namni Kadhannaa torbii cufaa qabate waanta isa barbaachisu qabatee erga gara bakka kadhannaatti galcheen booda Kadhannaan torbii sun hanga dhumutti namaan walitti hin dhufu. (Faar 101:6-7)
ii. Kadhannaa Toorbii (subaa’ee) Waldaa
Kadhannaa torbii waldaa kan jedhame, luboonni, amantootni, dhiironnii fi dubartoonni, jaarsolii fi dargaggoonni waliin ta’anii Mana Kiristaanaa fi bakkeewwan mijatoo ta’an hundatti walitti qabamanii Kadhannaa torbii galanii dha. Amantootni Kakuu Moofaas gara Waaqayyootti deemuudhaan kadhachaa turan. 1Saam 1:9, Faar 121:1, Luq 18:10-14
Bara Kakuu Haaraattis, hordoftoota Duuka bu’ootaa kan ta’an, monoksoonni, luboonnii fi amanattootni, kawaalotatti, Mana Kiristaanaatti, mana barnoota Dilbataatti, sadarkaa xoofoo afooshaatti jajjabina afoosha isaaniif, afoosha isaanii keessaa isa tokko yommuu rakkoon mudatu Kadhannaan torbii waaldaan /gamtaan ni qabatamaa.
Read more: Kutaa 3ffaa Gosa Kadhannaa Toorbii (subaa’ee)
Kutaa 2ffaa Kadhannaa Torbii (subaa’ee) Raajotaa
Kadhannaa Torbii (Subaa’ee), Maalummaa fi Sirna Isaa
“Iyyeruusaaleem Keessa Turaa”
Mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaatti Ibsa Sinodoosii Qulqulluu irraa kenname